Vaovao - Inona ny haben'ny jiro amin'ny rindrina napetraka eo amin'ny lohan'ny fandriana 2 metatra?
1. Ny jiro amin'ny rindrin'ny fandriana dia tokony ho 1.5 ka hatramin'ny 1.8m miala amin'ny tany hatrany ambany. Raha mivoaka ny jiro amin'ny rindrina amin'ny rindrina dia tokony ho 10cm ka hatramin'ny 40cm ny elanelana misy eo amin'ny rindrina sy ny jiro eo am-pandriana. Raha ny haavon'ny fandriana dia 45 cm, miampy ny haavon'ny kidoro mahazatra dia mety hahatratra 90 cm, avy eo ny haavon'ny jiro amin'ny rindrin'ny fandriana dia tsy maintsy mihoatra ny 90 cm, ary tsy maintsy apetraka eo an-tampon'ny latabatra fandriana.
2. Ny haavon'ny jiro amin'ny rindrin'ny fandriana matetika dia 90 cm. Ny haavon'ny jiro amin'ny rindrin'ny fandriana dia asaina 1,7 metatra rehefa mametraka ny jiro amin'ny rindrina eo am-pandriana. Raha apetraka arak'ity habeny ity dia ho voarindra kokoa ny fahitana azy, ary mahafeno ny fepetra takian'ny vatan'olombelona ihany koa. Ny haavon'ny jiro amin'ny rindrin'ny fandriana dia tsy tokony hihoatra ny 1,8 metatra, izay mora voan'ny astigmatisme ary tsy mahavita mandrehitra jiro.
3. Alohan'ny hametrahana jiro amin'ny rindrina eo am-pandriana dia tsy maintsy refesinao aloha ny haavon'ny fandriana, ny haavon'ny latabatra am-pandriana ary ny haben'ny olona ao anatiny alohan'ny hametrahana azy. Amin'ny ankapobeny, ny hazavana malefaka dia tsara kokoa, ary ny haavon'ny hazavana dia tokony ho latsaky ny 60 watt. Ho fanampin'izany, ny karazana jiro rindrina isan-karazany dia tokony hofidina mifanaraka amin'ny fepetra apetraka. Raha somary kely ny efitrano dia asaina mampiasa jiro rindrina tokana ianao. Raha lehibe ny efitrano dia azonao atao ny misafidy jiro rindrina roa loha. Ho an'ny toerana lehibe dia misafidiana jiro rindrina matevina kokoa.